Ndeapi mabhegi anogona kushamisa kupera kwegore rino? | Ehupfumi Zvemari
Kwangosara kota imwe chete kusvika 2018 yagadziriswa uye izvo zvave zvichimboodza moyo chikamu chikuru chevatengesi. Chero zvazvingaitika, kuchine nguva yekugadzirisa zvikanganiso uye kuve munzvimbo yekupedza gore nemari inopfuura inogutsa mumaakaundi ako. Kunyange zvakadaro, iyi sarudzo haizove isina njodzi Nekuti izvo zvese ndezve pamusoro pazvo, shure kwezvose, kuve nekuwedzera hasha mukuvhara zvisina simba mhedzisiro yatakatora kusvika panguva ino chaiyo.
Iko kushanduka kwemari mukati memwedzi mipfumbamwe yekutanga yadarika hazvisi izvo zvawaitarisira kubva kutanga kwegore. Icho chikonzero chakatokwana kusiyanisa yako nzira kudyara panguva yekupedzisira nhanho iwe yawakasiya gore rino. Kusvika padanho rekuti iwe unoda kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire, hauzove nesarudzo asi dzinosiyana nenzvimbo mumisika yemari uko iwe kwaunoda kuwedzera yako mari kubva ikozvino. Nekuti pakupera kwezuva ndiyo yatove yekupedzisira nzira yawakasiya kuti ubudirire mugore rino yafambira mberi, pane nhau dzakawandisa maererano neshanduko yemitengo yayo.
Nezve misika yequity mukondinendi yakare, mashoma ndiwo mashumo anounzwa kwauri. Sezvo vatengesi vanowanzoreva, "hove dzese dzinotengeswa." Kupfuura iyo spikes dzinogona kutanga muchikamu chino chekupedzisira chegore. Hazvishamise kuti ichave iri mhando yezvigadzirwa izvo zvinokonzereswa nevatariri vemari yekudyara kuchengetedza masevhisi avo epachivande. Asi zvirokwazvo iwe haugone kuwana zvinokatyamadza zvikuru. Ehezve, iyi haisi mamiriro ezvinhu yeimwe chiyero chegore chiri kuenda. Asi, kana kusarwadziwa kana kubwinya, sevazhinji vevashoma nevapakati varimimari vanoyambira.
1 Kupera kwegore: Ndekupi kwekudyara?
2 Russia: iyo huru yakanganikwa
3 Musika weChina wekutengesa wakarasikirwa ne20%
4 India mune yakajeka uptrend
5 Brazil: sarudzo mumatsutso
Kupera kwegore: Ndekupi kwekudyara?
Mukati meichi chiitiko, hapazove nesarudzo kunze kwekuona kuti ndedzipi nzvimbo dzenzvimbo dzinopa mibairo yepamusoro pakupera kwegore, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinogona kuburitsa chokwadi mabhizimusi mikana, sezvauchaona kubva panguva chaidzo idzi. Nekuti zvirizvo, nyika dzepasi rose dzinoratidza hunhu husina kuenzana nekuti haisi misika yose yepasi rose yakaita nenzira imwecheteyo kunhau dzehupfumi dzakaburitswa mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore. Nekutsauka kubva kune imwe indekisi kuenda kune imwe kusvika pa10%.
Saka kuti iwe ugone kuita sarudzo dzakanakisa mukota yekupedzisira yegore, tichaenda kukupa iwe yezviitiko zvinoita kuti kuchengetedza kunobatsira kubudirire kunogona kuve kwechokwadi. Kunze kwenzvimbo dzenyika dzakaringana uye idzo dzepedyo nharaunda, inoita kunge inoratidza a divi maitiro izvo zviri kukonzera chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati kuora mwoyo. Nekuti usakanganwa kuti kune hupenyu hunopfuura hwenyika indekisi yemusika wemasheya. Iko kwaunogona kuwana chaicho mikana yebhizinesi, sezvo iwe uchizokwanisa kuona izvozvi.
Russia: iyo huru yakanganikwa
MaSlavic equities ndeimwe yesarudzo dzinonakidza kutarisana nekupera kwegore. Kuderera kunowanikwa mukati memakore apfuura kunogona kupa nzira kune yakasarudzika inofarira zvido zvavo uye ndiani anoziva kana zvingatungamira mukuwongorora pamusoro pezvaitarisirwa. Tamba mukuda kwako shanduko iyo iyo mutengo wemafuta sezvo kutsamira kwayo pane ayo akakosha kwazvo masheya index kunopfuura kuzivikanwa. Nekwakasiyana siyana kwakanyorwa makambani ayo akabatana nemafuta asina kuchena uye anogona kuita zvirinani kupfuura mamwe ese. Nekudaro, iri bhegi rine makomisheni akawedzera kupfuura emunyika.
Kana paine chero epasi rose musika wemasheya unogona kukushamisa iwe munguva ino, zviri pachena kuti maRussia equities. Iwe haugone kukanganwa kuti une kukoshesa kwakakwirira kugona kupfuura mune yakasara kesi. Uye kana iwo musika wekutengesa wakakwira mumwedzi iyi, hapana mubvunzo kuti musika weRussia wemusika ungangodaro uri kushamisika kwakanaka kwechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe uchiverenga kuti kusagadzikana kwayo kwakanyanya kwazvo, nemisiyano yakakura pakati pemitengo yayo yepamusoro neepasi. Ichi chikonzero chisingaite kuti ive yakakodzera kune mamwe ma profiles muvatengesi uye inogona kunge iri yako nyaya.
Musika weChina wekutengesa wakarasikirwa ne20%
Kana paine chakakundikana chakakura gore rino, imari dzeChinese, idzo dzakarasikirwa ingangoita makumi maviri muzana muzvikamu zvayo zvemasheya. Semhedzisiro yekushomeka kwekutengesa kumanikidza munzvimbo ino yehupfumi. Asi chaizvo nekuda kwechikonzero ichi chero nguva inogona kuchinja zvakanyanya maitiro. Uye dai zvaive nenzira iyi, hapana mubvunzo kuti kumuka kunogona kuve kwakatwasuka kusvika pakudzoreredza nhanho dzakapfuura. Hazvishamise kuti iyo Chinese stock market inogona kugadzira kaviri manhamba anomutsa mune mashoma mashoma ekutengesa zvikamu. Kunyangwe iine njodzi mukushanda kuri pamusoro peiyo yemimwe misika yepasi rose. Chinhu chaunofanira kutaurira kutanga mafambiro mune ino yakakosha nyika stock stock.
Chikamu chakanaka chevaongorori vepasirese vakasarudza iyi mari yekutanga chaiyo vachifunga kuti inogona kuita zvirinani. Kunyangwe kusahadzika kunopihwa nemusika uyu kuona kana ichave iri nguva yekutanga zvinyorwa uye kuita mashandiro nemutengo wakanaka. Chinhu chakakosha kwazvo musika wezvemari wakasarudzika souyu, uko rimwe zuva zvikamu zvaro zvinokwira kupfuura 5% uye inotevera chikamu chimwe chete chakasara kana kutopfuura. Kwete pasina, ichokwadi kuti hazvisi nyore kwazvo kushanda nemaitiro avo Uye matanda akakwirira kwazvo kubva pakutanga.
India mune yakajeka uptrend
Kana paine musika wekutengesa wakanyudzwa mune yakajeka kumusoro chiitiko, izvi zviri pachena kuti ndezve nyika yeAsia. Kunyangwe paine chokwadi chekuti anga achigadzirisa chinzvimbo chake kwemwedzi mishoma uye kubva pano maonero zvinotyisa kuvhura nzvimbo. Tichifunga nezve njodzi idzo mitengo inoramba ichidonha uye inogona kurasikirwa nenzvimbo dzakakodzera. Zvisinei, chero nguva iwe yaunogona tangazve nzombe mhanya uye ichave nguva yekutora zvinzvimbo mune zvimwe zvekuchengetedzeka zvakawanda zvakanyorwa pane ayo akakosha mareti emasheya. Kunyangwe paine kusagadzikana kwekuti mazhinji acho haazivikanwe zvachose kune vazhinji vadiki nepakati varimi vekuMadokero.
Izvo zvinokurudzirwa zvakare nevanoongorora zvemari kana vachifunga kuti zviyero zvavo zvichiri nerwendo rwekumusoro. Nekudaro, kana iwe usiri kuda kuisa njodzi yakawanda muzvinzvimbo, mhinduro iri mukusarudza mari yekudyara iyo inodyara mapotifoliyo avo mukutsinhana kwenyika. Kunyangwe kusanganisa mari pamwe nezvimwe zvinhu zvemari, senge zvigadzirwa zvemari yakatarwa. Nenzira iyi, varidzi veichi chigadzirwa chemari vanodzivirirwa zvirinani mune zvakanyanya kushata mamiriro emisika yemari. Zvirinani mukana iwoyo unofanirwa kutariswa kubva ikozvino.
Brazil: sarudzo mumatsutso
Pasina mubvunzo, musika wemusika weRio de Janeiro uchange uchitarisa zvinogona kuitika musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitika mumazuva anotevera. Iyo inogona kuve iyo inokonzeresa kuti ichinje maitiro ayo uye inonanga yakakwira yakanyanya kusimba uptrend. Asi izvo zvinopesana zvinogona zvakare kuitika uye panogona kuve nekudonha kwakakomba mune ayo masheya indices. Kana paine bhegi iro inopa kusava nechokwadi kukuru ndiyo mari yeBrazil. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda kana iwe ukavhura zvinzvimbo, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete, siya akawanda ma euro munzira. Njodzi ndeimwe yemadinomine ayo akakosha zvakanyanya.
Chero zvazvingaitika, uyu musika wemasheya wadonha zvakanyanya mumakore achangopfuura uye vatengesi vazhinji vari kumirira neshungu shanduko inotarisirwa mune yekupedzisira kuti iitwe gore rino kuti vatange mafambiro avo ekudyara munzvimbo yakakosha yehupfumi mukondinendi yeAmerica. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekunyatsoteerera kune zvese zvinogona kuitika muBrazil mumasvondo anotevera nekuti zvinogona kunge zviri zvechokwadi bhizimisi mukana pane ako ekudyara ekupera kwegore rino razvino. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Sezvaungave iwe waona, mikana mitsva yekudyara yakazarukira iwe, asi ese ane poindi imwe chete uye ndeekuti iwo mashandiro anosanganisira njodzi huru. Ino inguva yekubvunza kana iwe uri muchinzvimbo chekutora yerudzi urwu rwekuvhiya uye pasi peiyo kusimba. Nekuti iwe unogona kuzadzisa zvinangwa zvako, asi zvakare gara munzvimbo yakaoma kwazvo kune zvaunofarira. Zvichava panguva ino yekuongorora kana zviri nyore kuti iwe upinde mune mimwe misika yemari yatakakuratidza mune ino chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeapi mabhegi anogona kushamisa kupera kwegore?